Jawaab kooban Oo ku socota HECO_Burco?
Maanta ayey kaga habooneyd balan qaadka barri madaama lagu jiro xaalad adag #COVID19 & Ramadaan.
Ninka maalin adag wax kuu tara ayad wax isku tihiin? Waxa aan usoo jeedin lahaa qiimaha iney ka dhigaan (0.3cents ilaa 0.5cents) sidoo kale Shirkada HECO ma ka hadashey shuruucda adkeyd ee inta badan macmiilka kula dhaqmeysey sida adaa isku qaba dhibta dabka, ee dhinacana ka rarnaa, lagana saxeexayey macbiil baahi wado oo aan waxba qorin waxna akhriyin?????
Cabasho baraha bulshada la soo mariyey, meel kale oo ay kaga haboon tahey garan maayo, mar hadaan lamudaharaadin, baabur, guryo iyo dad waxyeelo ka soo gaadhin, sidoo kale, danta ĺshaqsiga , cabashada gaarka ayaa xafiisyada loo tagaa. Lakin cabashada guud waxa lagu muujiyaa goobaha caamka sida baraha bulshada, Facebook & kheyriyada & wadooyinka.
Shirkadu maaha iney hanjabto sidoo kale eed kula dul dhacdo macamisheda shirkada cabashada salmiga ka dhiibtey baraha bulshada?? Shirkadu maaha iney la tartanto maqaalo yar oo aan oo aan helin maalin galin dawladeed ama maal gaalin caalamiya sida #World_Bank mashaaricda mid ka mida waxa ku dhawaa 1millon Us Doollar, sida halka hose idinka muuqata, shirkada #HECO, waa iney is barbar dhigtaa kuwa sideeda #Sollar_System ku heley magaca bulshada sidoo kale gabiley leydhkedu yahey 0.5cents?? Shirkadu HECO ma inala wadaagtey hantida ay ku heshey magaca bulshada danyarta reer burco, waayo waxa maqlayey dhawr masaajid ayaan leydh ka bixinaa?
Arinta hospitalka Burco 6sano ee la soo dhaafey aad baan xogagaal ugu ahaa lakin waxba fidmo abuuri maayo, waa iska dhaafi lkn waxa aad isoo weydiisaan markii ugu danbeyey idinka $120kun dollar deyna ku leh baan ogaayee ma waxbaa iska badeley? Ma ka dhaafteen hadaad carab baabteen??? Waxa aan soo jeedin lahaa wixii hada ka danbeeya shirkada hoos loola hadlo, gudi dhalin yara is xilqaanto lana kulmaan masuuliyinta shirkada.
Somali Activist Nouman M Muse